fampakaram-bady any ivelany sy ny any Shina - izay iray nitoetra fizarana ny fananana - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
fampakaram-bady any ivelany sy ny any Shina - izay iray nitoetra fizarana ny fananana
Raha misafidy ny hanana roa fampakaram-bady iray ao an-trano ny firenena ary ny iray any Shina - izay iray mamaritra ny fizarana ny fananana raha ny fisaraham-panambadiana
Tsy izany ihany no mampihatra ny vola sy ny fananana anao manokana ao amin'ny firenena ny fampakaram-bady.
Dia ny 'Shinoa fampakaram-bady' ihany no hanodidina ny fananany ianareo no mihazona ao Shina raha ny fisaraham-panambadiana. Io no tena fanontaniana tsara ho an'ny ara-dalàna ny saintsika. Indrisy anefa fa, tsy misy fomba mora mba hanome anareo ny valiny ara-dalàna. Ary masìna ianao, avelao aho mba hanazava sy hampivelatra ny valiny voalohany.
Raha tsorina dia, ny valiny dia miankina amin'ny izay firenena manokana anao no mandinika.
firenena maro no hanaiky ny fanambadiana tanterahana any amin'ny firenena hafa, fa izany dia ho kely mafimafy kokoa mba hampihatra ny fanapahan-kevitra nomen'ny vahiny Fitsarana dia toe-javatra sasany.
angamba ny fanambadiana atao voalohany dia isaina ho toy ny 'manan-kery bebe kokoa sy mamatotra' sy ny lalàna fa ny firenena dia azo ampiasaina mba zarao ny fananana raha ny fisaraham-panambadiana. Fa ihany koa, masìna ianao, ataovy ao an-tsaina fa raha ny fisaraham-panambadiana ny didim-panjakana ao Shina, ny fangatahana dia natao mba hampisaraka ny fananana any ivelany, dia ny fahazavan-tsaina avy amin'ny zavatra efa nandre avy amin'ny namana izay nandeha alalan'i izany fa ny fitsarana eo an-toerana ihany no miresaka fananana ao Shina, ary tsy mijery ny fananana natao any ivelany. Tiako ny milaza fa raha hanambady any Shina. amin'ny pirenena Shinoa sy ianao vahiny, raha ny fanambadiana mifarana amin'ny fisaraham-panambadiana ao anatin'ny teny Sinoa Fianakaviana Fitsarana, hany fananany ao Shina dia azo zaraina, ary tamin'ny tany rehetra probabilities, ny eo an-toerana dia mandray ny fiaraha-miory amin'ny Fitsarana ny fanapahan-kevitra. Toy ny zavatra niainany manokana, ny baiko avy an-trano ny Fitsarana any ivelany no tena marina royally tsy ao Shina. Tsy misy fomba mba hahazoana an-toerana ny manam-pahefana mba hampiharana azy. Manontany tena aho raha mety ho tsara ho an'ny vahiny bandy hanambady Sinoa gal mba hahazo prenuptial fifanarahana. Inona ny hevitrao? Izaho mihevitra fa ny toy izany fifanarahana dia tsy hita ao Shina.
(Tsy izaho 'an-tsaina ara-dalàna', fa amin'ny maha-laika manontany tena aho raha toa ka ara-dalàna ny roa fampakaram-bady mihitsy.
Raha toa ka ny voalohany fampakaram-bady dia fantatra any amin'ny firenena hafa, dia tokony tsy ho afaka hanambady ireo indray. Raha ny fisaraham-panambadiana fitsarana aho, dia tena azo antoka ny toerana ny fisaraham-panambadiana no zava-dehibe kokoa ny toerana ny fampakaram-bady tany am-boalohany. Ny fanambadiana, fisoratana anarana dia afaka ny haka toerana ihany amin'ny Ofisialy ny Birao Fisoratana anarana. Raha manapa-kevitra ny hisoratra anarana ao Shanghai, ianao dia iharan'ny Shinoa ny lalàna sy ny fitsipika. Raha manapa-kevitra ny hisoratra anarana ohatra ao Frantsa, dia ianao foto-kevitra frantsay ny lalàna sy ny fitsipika.
Ny zava-dehibe dia tsy firy ny fampakaram-bady ianao (afaka telo ny vehivavy ihany), fa izay voasoratra ofisialy ny fampakaram-bady ny fotoana voalohany (ny faha- sy faha, dia tsy isaina raha tsy efa nisara-panambadiana alohan'ny).
Toy ny fizarana ny fananana na ny harena, tsy de facto toe-javatra ianao, rehefa manambady. Dia samy tokony haleha mba jereo ny mpisolovava iray mba hanao ny taratasy mba hamoronana ity alalan'ny fanambadiana fizarana ny fananana.
Trosa Famoriam-Bola I Shina - Trosa, Ny Fanarenana Ireo Mpisolovava
Chiny: prawdziwe majątkowego prawa - prawa do Biblioteki Kongresu